Ukubala njani ukutya kwePati - Party Food Ideas
Xa usenza itheko, kufuneka umisele inani lokutya olifunayo. Ufuna iindwendwe zakho zanele ngokwaneleyo ukuze zizive zonelisekile, kodwa awufuni toni yokutya okuseleyo. Ukubala izixa zokutya ikwayindlela entle yokunceda ukumisela uhlahlo-lwabiwo mali lweqela lakho.
Ukubala isixa sokutya ngomntu ngamnye
Akukho fomyula yomlingo okanye umgangatho wokuba ungakanani ukutya oza kuyidinga kwitheko. Abanye abantu baya kutya ngaphezulu okanye ngaphantsi kunoko bekulindelwe, iindwendwe ezimbalwa zinokungabonakali, okanye umntu angenise umntu ongaphezulu okanye ababini. Kungcono ukugqithisa inani lokutya nje kancinci kunokuba kuphele.
Ukutya kweqela lebhola ekhatywayo
Ukutya kwePati yehlobo
Ukutya okuLula kwePati
Ukulandela izikhokelo ngokubanzi xa ucwangcisa ukutya kwakho kunokukunceda ufumane inani elifanelekileyo lokutya.
Izibheno - Kumatheko apho kunikezelwa kuphela ngezibheno kunye nokutya ngomnwe, yenza uqikelelo lwakho kwizibheno ezihlanu ukuya kwezisibhozo umntu ngamnye, ngeyure. Ukuba kukho ukutya okubandakanyiweyo, unganciphisa ukubuyela kwisithathu okanye kwisine umntu ngamnye ngeyure ngaphambi kwesidlo. Nika ezinye iintlobo zezibheno kwisihlwele esikhulu.
Ukutya okupheleleyo -Ukuba ubonelela ngezitya ezikhethiweyo, zama ukuqikelela ukuba yeyiphi eya kuba yeyona ithandwayo kwaye unezongezelelo ezandleni. Ukuhambisa ubungakanani kuya kuxhomekeka kwizitya, ke ukuba uya kwindlela ye-buffet, qiniseka ukuba unokwanela wonke umntu ukuba atyebise isitya ngasinye. Izitya ezisecaleni zinokukhohlisa, kodwa unokuqikelela malunga neeoyun ezine zesitya ngasinye njengokukhonza.
Iisaladi ezilungisiweyo - Kwiitapile, ipasta, okanye ezinye iisaladi ezilungiselelwe, igaloni enye iya kondla abantu abangama-20-25.
Isaladi eluhlaza - Kwiisaladi zemifuno ezinamagqabi, cwangcisa malunga nekomityi enye umntu ngamnye, phambi kokuba unxibe.
Iziqhamo kunye neetreyi zemifuno - Kwiziqhamo ezitsha, malunga nesiqingatha sendebe yomntu ngamnye kufuneka enze lo msebenzi. Ngemifuno, qikelela malunga neziqwenga ezisibhozo ukuya kwezilishumi ngomntu ngamnye. Yiba nediphu eninzi ekhoyo.
Iidayisi -Kulungile ukubonelela ngeedessert njengezinto ezinikezelweyo enye, ukuze ubenokubala ngokulula ukuba zingaphi ozifunayo. Unokongezwa okongeziweyo kwisandla sabadli abakhulu okanye abo banamazinyo amnandi ngokukodwa. Ikhekhe enye engu-9 'izakulungiselela abantu abali-10 ukuya kweli-12; ipayi enye ye-9 iyakukhonza u-6 ukuya ku-8.
IziBheno izixa zePati yeYure ezintathu
Itheko leeyure ezintathu yindawo elungileyo yokuqala; ukuba iqela lakho liza kuba lide, tshintsha ukubala ukulungiselela ixesha elongezelelweyo.
Ukutya Ukuya kwiindwendwe ezili-10 10-20 20-30 30-40 40-50
Idiphu Ipeyinti enye 1 ikota Iiponti ezi-3 Iikota ezi-2 Iiponti ezi-5
Isiqhamo Iikomityi ezi-5 Iikomityi ezili-10 Iikomityi ezili-15 Iikomityi ezingama-20 Iikomityi ezingama-25
Imifuno Iziqwenga ezingama-60 Iziqwenga ezili-120 Iziqwenga ezili-180 Iziqwenga ezingama-240 Iziqwenga ezingama-300
Iichips Iponti enye 1-1 / 2 iiponti Iiponti ezi-2 Iiponti ezi-3 Iiponti ezi-4
IiCanapes 8 kumntu ngamnye I-160 kumntu ngamnye 240 kumntu ngamnye 320 umntu ngamnye 400 kumntu ngamnye
Ukubetha ngenqindi 2 iilitha Iilitha ezi-3 4 iilitha Iilitha ezi-6 8 yeelitha
Isiselo somdiliya Iibhotile ezi-3 Iibhotile ezi-5 Iibhotile ezisi-7 Iibhotile ezili-9 Iibhotile ezili-11
Ikofu okanye iti Iikomityi ezingama-20 Iikomityi ezingama-40 Iikomityi ezingama-60 Iikomityi ezingama-80 Iikomityi ezili-100
Ukutya kwamaQela okutya
Cwangcisa isitya esiphambili (inkukhu, iturkey, inyama yenkomo, inyama yehagu, iham, okanye i-casserole) kunye neesaladi, amacala, iidizethi kunye neziselo.
Indawo efanelekileyo yokuhlala eGeorgia
Inkukhu iphelele 2 (4-iponti) 4 (iiponti ezi-4) 6 (4-iponti) 8 (iiponti ezi-4) 10 (4-iponti)
Iturkey iphela 1 (iiponti ezili-12) 2 (iiponti ezili-12) 3 (iiponti ezili-12) 4 (iiponti ezili-12) 5 (iiponti ezili-12)
Inyama yenkomo engenasiphelo Iiponti ezi-5 Iiponti ezili-10 Iiponti ezili-15 Iiponti ezingama-20 Iiponti ezingama-25
Inyama yehagu eyosiweyo okanye iham Iiponti ezi-5 Iiponti ezili-10 Iiponti ezili-15 Iiponti ezingama-20 Iiponti ezingama-25
IiCasseroles 2 (13x9 ') 3 (13x9 ') 4 (13x9 ') 5 (13x9 ') Isixhenxe (13x9 ')
Izidlo ezisecaleni Iikomityi ezi-5 Iikomityi ezili-10 Iikomityi ezili-15 Iikomityi ezingama-20 Iikomityi ezingama-25
Isaladi eluhlaza Iikomityi ezili-10 Iikomityi ezingama-20 Iikomityi ezingama-30 Iikomityi ezingama-40 Iikomityi ezingama-50
Isaladi yeminqatha Iikomityi ezi-5 Iikomityi ezili-10 Iikomityi ezili-15 Iikomityi ezingama-20 Iikomityi ezingama-25
Imiqulu okanye isonka sesonka Iziqwenga ezingama-20 Iziqwenga ezingama-40 Iziqwenga ezingama-60 Iziqwenga ezingama-80 Iziqwenga ezili-100
Iikeyiki 1 ikhekhe yomaleko 2 iikeyiki zomaleko Iikeyiki ezi-3 Iikeyiki ezi-4 Iikeyiki ezi-5
Iicookies Amashumi amabini 40 60 80 100
Iinyawo Mbini 3 4 5 7
Ukutya kweDessert Party
Iidessert zinokuba yinkwenkwezi yeqela, ke qiniseka ukuba unokwanela ukuze wonke umntu aphele kwinqaku elimnandi!
Iikeyiki 1 ikhekhe yomaleko 2 iikeyiki zomaleko Iikeyiki ezi-3 Iikeyiki ezi-5 6 iikeyiki maleko
Ukubamba okanye ukuqhekeka 2 (9 'x 13') 3 (9 'x 13') 4 (9 'x 13') 5 (9 'x 13') I-7 (9 'x 13')
Iicookies Ishumi elinambini Ishumi elinesihlanu Ishumi elinesixhenxe Ishumi elineshumi I-13 elineshumi elinambini
Iikuki zebar Ishumi elinambini Ishumi elinesihlanu Ishumi elinesixhenxe Ishumi elineshumi I-13 elineshumi elinambini
Ucwambu lomkhenkce 1 ikota Ikota 1-1 / 2 Ilitha enye 1-1 / 2 iilitha 2 iilitha
Iingcebiso zokuBala ukutya
Landela iingcebiso ezikhawulezayo zokukunceda uthathe isigqibo sokuba uza kutya okungakanani:
Soloko uphosakele kwicala lokutya okuninzi. Kulula kakhulu ukuthatha okuseleyo ekhaya okanye ukubathumela ekhaya kunye neendwendwe zakho kunokuba uvumele abantu bagoduke belambile.
Faka zombini ukhetho 'olunzima' kunye nokukhanya. Abanye abantu baya kulamba kunabanye, ke ukubonelela ngokutya okuninzi kuya kubavumela ukuba bazalise ngaphandle kokutya isitya ngasinye.
Ukuba ucinga ukuba isitya esithile siza kuthandwa kakhulu, cwangcisa ukwenza okanye uthenge izinto ezongezelelweyo.
Lumka kubungakanani bokutya ekucetyiswayo. Gcina ukhumbula ukuba ngaba ii-servings ziya kuba sisidlo okanye ubungakanani bokutya kwaye emva koko uzichonge ngokwakho ukuba zingaphi ii-servings ezikwiphakheji nganye.
Ukuqwalaselwa kweFactor In
Inani leendwendwe yeyona nto ibalulekileyo, kodwa kukho nezinye izinto ezimbalwa eziqwalaselweyo.
Zingaphi iindwendwe eziza kubakho
Inani leendwendwe kwiqela lakho liza kumisela inani lokutya oza kulidinga. Qiniseka ukuba ubuza iindwendwe kwi-RSVP, kodwa ukuba awuva mntu, kukhuselekile ukucinga ukuba uzokuzimasa.
Ixesha leSuku lePati
Ixesha losuku lichaza iintlobo zokutya oza kuziphaka. Ukuba itheko licwangcisiwe ngexesha lesidlo, umzekelo, kuya kulindeleka ukuba ukhonze into ebalulekileyo. Ukuba ipati yakho isebusuku okanye phakathi kwemini, ungakhonza izibheno kunye nokutya okulula.
Uluhlu lobudala beendwendwe
Awungekhe ucinge ukuba uluhlu lweendwendwe luyakubaluleka ekucwangciseni ipati, kodwa qaphela oku: Ungakulungiselela ukutya okungakanani iqela lolutsha olulishumi? Ngoku, ungakulungiselela ukutya okungakanani ukulungiselela abantu abadala abalishumi? Ngokubanzi, kunokubakho umohluko omkhulu kwincumbo phakathi kweminyaka yobudala eyahlukeneyo.
uphawu inja yam iya kubeleka
Uhlobo lokutya okuSetyenziswayo
Ukuba ucwangcisa ukukhonza isidlo, okanye unokutya okuninzi onokukhetha kwitafile ye-buffet, unganciphisa ukutya okutyayo kunye nezibheno kwiqela lakho. Kwelinye icala, ukuba uthembele ekutyeni ngomnwe kuphela ukugcwalisa iindwendwe zakho, kuya kufuneka unezinye zazo.
Landela izikhokelo zempumelelo
Kuphantse kube nzima ukwazi ngokuchanekileyo ukuba ungakanani ukutya oza kuyidinga kwitheko, kodwa ngezi zikhokelo, uya kuba nakho ukuzinika umbono olungileyo wokuba zingaphi iinkonzo zento nganye omele ucwangcisele yona. Impazamo kwicala lokufumana intsalela ukuba awuqinisekanga ukuba ii-RSVP zichanekile; kusoloko kungcono ukuba nesongezelelo esincinci kunokuba siphelelwe!
Iiproms Isiselo Somdiliya Iimveliso Zesondlo Ukunikewa Izipho Zomntwana Uboniso Olubonayo
ungayifumana njani idayi ebomvu kwikhaphethi
uthena njani umthi wemaple
iindawo ezincinci ezibuhlungu ze tattoo
itemplate yesiphakamiso sesibonelelo sokufumana inzuzo